सावधान! यो एक चीजको कमीले ज्यानै जान सक्छ, यस्ता छन् संकेत – Etajakhabar
सावधान! यो एक चीजको कमीले ज्यानै जान सक्छ, यस्ता छन् संकेत
ताजा खबर:- भिटामिन B12 ले शरीरको बोसोलाई उर्जामा परिवर्तन गर्ने काम गर्छ र साथै यसले डी.एन.ए र रेड ब्लड सेल्स निर्माण गर्ने काम गर्छ । यसले शरीरको हरेक भागको नसालाई प्रोटीन आपूर्ति गर्ने जस्ता अन्य काम गर्छ । शरीरमा यसको कमी हुँदा कयौँ पटक व्यक्तिको मृत्यु पनि हुनसक्छ । यहाँ हामी यसको संकेतको बारे चर्चा गर्दैछौँ ।
अमेरिकी हेल्थ एक्सपर्ट डा. मेरकोला ले हालै गरेको एक अनुसन्धानको अनुसार, ८० प्रतिशत वयस्कहरूमा यस्तो भिटामिनको कमी पाइयो जुन जीवनको लागि खतरनाक हुनसक्छ । जुन भिटामिन B12 हो, जसको चर्चा सामान्य रूपमा कम हुन्छ । किन हुन्छ, यसको कमी घातक?
नर्भस सिस्टमको लागि आवश्यक
नर्भस सिस्टमले सन्तुलित रूपमा काम गर्नको लागि भिटामिन B12 अत्यन्त आवश्यक मानिन्छ । यसको कमीले ब्रेनलाई गम्भीर नोक्सान पुर्याउन सक्छ । यो पछि गएर मृत्युको कारण पनि बन्न सक्छ । डा. मेरकोला को अनुसार, भिटामिन B12 को कमीको कारण पत्ता लगाउन कठिन हुन्छ । जब यसको जानकारी पत्ता लाग्छ तबसम्म निकै समय ढिलो भैसकेको हुन्छ । चिकित्सकका अनुसार, आज हामी यस्ता केही १० संकेतको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ, जसलाई पहिचान गरी सावधानी अपनाउन सकिन्छ ।
१-प्रायजसो थकान र कमजोरी महसूस हुनु ।
२-रगतको कमी हुनु ।
३-मुटुको धड्कन तीव्र हुनु ।
४-श्वास फुल्ने समस्या हुनु ।
५-लगातार कब्जियतको समस्या हुनु ।
६-तीव्र रूपमा वजन घट्नु ।
७-स्मरण क्षमतामा कमी हुनु ।
८-टाउको दुख्ने समस्या रहिरहनु ।
९-लूज मोशनको समस्या हुनु ।
१०-जोर्नी दुख्ने समस्या हुनु ।
भिटामिन B12 को कमी पुरा गर्ने आहार
दूध- एक गिलास दूधमा ०.५५ माइक्रोग्राम
दही- एक कचौरा दहीमा ०.७५ माइक्रोग्राम
अण्डा- एक अण्डामा ०.३९ माइक्रोग्राम
चिकन- १०० ग्राम चिकनमा १.११ माइक्रोग्राम
माछा- १०० ग्राम माछामा ०.६२ माइक्रोग्राम
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर १९, २०७४ समय: २०:२०:२८